तीनै खानलाई फेरि किन चाहियो क्याट्रिना ? « News24 : Premium News Channel
तीनै खानलाई फेरि किन चाहियो क्याट्रिना ?
Posted By News24Nepal.TV || Date: 12 June, 2017
एजेन्सी । एक समय थियो, क्याट्रिना कैफले बलिउडका एकसे एक हस्ती मानिने तीन खान ९आमिर–सलमान–शाहरुख०सँग फिल्म खेलेकी थिइन् । जबकि अन्य कुनै अभिनेत्रीलाई कुनै एउटा खानको फिल्ममा मात्रै मौका पाउनु पनि ठूलो कुरा हुन्थ्यो । तर, क्याट्रिना तीनै खानको रोजाइमा परेकी थिइन् । २०१२–१३ मा उनले सलमानसँग ‘एक था टाइगर’, शाहरुखसँग ‘जब तक है जान’ र आमिरसँग ‘धूम ३’मा धमाका दिइन् । ती दिन क्याट्रिनाका सुनौला दिन थिए । समकालीन अभिनेत्रीबीच उनले छिटो फड्को मारिन् ।
यही बीचमा उनलाई प्रेम रोगले सतायो । तर, केही वर्षमै उनले सलमानसँगको अफेयर तोडिन् । उनी रणवीर कपुरसँग दिल जोड्न पुगिन् । उनीहरू छुट्टिएको र फेरि जोडिएको भन्ने खबर आइरहन्छन् । सम्बन्ध जे जस्तो छ, कुरा उनै दुईलाई थाहा होला । यो बीचमा सलमान क्याट्रिनासँग निराश पनि भए । तर, क्याट्रिनालाई बिर्सिन सकेनन् ।
आफैँले बलिउडमा गतिलो उपस्थिति दिलाएकी क्याट्रिनालाई सलमानले ‘टाइगर जिन्दा है’मा ल्याए । एक था टाइगरको सिक्वेल यो फिल्म यसै वर्षको अन्तिममा रिलिज हुँदै छ । यो बीचमा क्याट्रिनालाई आमिर खानसँग ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’मा खेल्ने अवसर पनि मिल्यो । क्याट्रिनालाई आनन्द के रायको ‘तन्नु वेड्स मन्नु’मा शाहरुखसँग अभिनयको अवसर पनि मिलेको छ ।
‘रेस ३’को ट्वीष्ट कस्तो हुनेछ ?
फिमेल भर्सन’मा यस्तो बन्यो ‘बेबी आई लभ यू’ को ‘सायद तेरो मेरो’को गीत (भिडियोसहित)
बलिउडका यी हस्ती काठमाडौं आउँदै, जसले मनिषालाई बलिउडमा डेब्यु गराएका थिए
राजेश र शिवको ‘बागमती’ सार्वजनिक
तीन गाउँले युवाहरुको कथामा ‘माछा माछा’ बन्दै
किन अमिरले सञ्जय दत्तको वायोपिक फिल्म ‘सन्जु’खेल्न अस्वीकार गरेका थिए ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादन शुरु
बिनोद दास भन्छन्, ‘झण्डै सन्दीप लामिछानेको करियर सकिएको’
सन् १९८० को दशकयताकै ठूलो विमान दुर्घटना, क्युबा शोकमा डुब्यो
बेपत्ता मलेसियाली विमानका विषयमा नयाँ खुलासा
निलम्बित दिवेश लोहनीसहित ११ एसएसपीको सरुवा (सूचीसहित)
पूर्व माअाेवादीबाट नेकपाकाे केन्द्रीय समितिमा रहने ८८ जनाकाे नाम टुंगाे (नामावलीसहित)
पुदिनाकाे यी फाइदा
मोदी नेपाल आउनुभन्दा अगाडि पक्राउ परेका सातलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको यर्थाथ जानकारी चाँडै सरकारले प्रदान गर्छः नेवाङ
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली संकल्पः दर्जन नयाँ कार्यक्रम